Eserese | KONGOLISOLO
Kin Ebe Braconniers: ihe omume, akụkọ banyere akụkọ mgbe ochie “Ebe a ka nma mara ebe akpọ Royale; Ebe a bụ otu a kacha mara amara na Democratic Republic of Congo ”
Site na: KongoLisolona: June 24, 2020 09: 23 Enweghị asịsa
A maara Kin Ebe Braconniers dị ka ebe a ma ama ahịa (Wenze ya Bikeko). Eserese, ọrụ ọkpụ, ọrụ nka rọba (…) Ihe niile ...	GỤKWUO
Kedu ka esi zoo ndị nna nna anyị Black / Africa na White na westerni akụkọ ihe mere eme ha? Ọ bụrụ na omume ọjọọ niile dị njọ, ịgha ụgha bụ ihe ọjọọ kachasị njọ; liegha, na ndị nna nna Black / Africa na maka akụkọ ihe mere eme ha dị ebube, agaghịzi na-emebi mmụọ ndị ahụ na-achọ ìhè na eziokwu.
Site na: KongoLisolona: June 17, 2020 03: 33 Enweghị asịsa
E gosipụtara Ta-Mery (Be hụrụ n’anya Ala) na ndị nna nna anyị n’usoro dị ka “White” site na akụkọ ụgha na akụkọ ịkpa ókè agbụrụ nke ndị mwakpo anyị dị iche iche gara n'ihu na…	GỤKWUO
Ọ bụ akụkọ banyere ọmarịcha enyi na enyi ochie na-ejedebe n'ụzọ a na-atụghị anya ya: nwa ojii / onye Africa nwere enyi ya China; onye China a bụ eserese "Ka ndị China na-arụ ọrụ na eserese ya, otu n'ime ụtụtụ anọ a, enyi ya Black / Africa rịọrọ ya ka o mee ya otu n'ime ihe osise ya" Onye China a ji obi ya nabata
Site na: KongoLisolona: Mee 6, 2020 03: 00 Enweghị asịsa
Ndi China kwadebere ngwa ya, ndi Black / ndi Africa guzoro n’iru ya. Iji ịnụ ọkụ n'obi na enweghị oge, onye na-ese China malitere ọrụ. O tinyere obi ya dum n'ọrụ ya. Ọ na-agwa enyi ya N ...	GỤKWUO
Congo - Kinshasa & USA: nraranye nke National Museum nke DRC mgbe afọ atọ nke na-ewu ọrụ, Congo na Government ulo oru National Museum nke Democratic Republic of Congo (MNRDC) on 14 June 2019 ... (VIDEO)
Site na: KongoLisolona: July 9, 2019 04: 44 Enweghị asịsa
Na mpaghara nke 6 000 m2, ụlọ ahụ nwere ụlọ nnukwu nnukwu ụlọ ebe puku iri abụọ na abụọ nke ihe ọdịbendị nke Congo nwere site n'oge ọ bụla egosila: site na ...	GỤKWUO
Ihe onyonyo a na-adịghị ahụkebe: foto a jikọtara ọnụ nwere ike ime ka ụfọdụ ndị chịa ọchị ma nwee ndị ọzọ ọchị: n'eziokwu, ọ bụ ihe osise eresiri karịa euro 30.000.000 nye onye maara uru ọ bara
Site na: KongoLisolona: July 9, 2019 00: 00 Enweghị asịsa
Ọ bụ agadi nwoke dara ogbenye n’oge Louis nke XIV nke a hụrụ na o zuru ohi achịcha ma maa ya ikpe ọnwụ, mana ọnwụ dị mwute: "Si na…	GỤKWUO
Akara nka nke Kongolese: Onwetara m oke ọmarịcha art art mgbe m chọpụtara na mberede ọmarịcha ihe osise nke ndị nka na - amaghị ihe si Afrịka mere.
Site na: KongoLisolona: February 17, 2019 06: 19 Enweghị asịsa
Ọrụ okpukpe ndị a na-arụsi ike na nghọta siri ike bụ ihe mmadụ na-eche n’onwe ya rụpụtara ma mara mma karịa. "Naanị mgbe ahụ ka m matara na…	GỤKWUO
Aug07 09: 45